Khubaza i-Baloo ku-KDE 4.13: Sikukhombisa izindlela zokuyifeza | Kusuka kuLinux
Njengoba abaningi bazi, kusuka I-KDE 4.13 kushintshiwe I-Nepomuk ngenkomba entsha ebizwa ngokuthi Baloo, futhi-ke, izinketho zishintsha kancane lapho zingasebenzi.
Abasebenzisi abaningi babe nezinkinga ngokusetshenziswa ngokweqile kwe- CPU ngenye ingxenye Baloo, kodwa akuyona icala lami. Ngisho, kufanele ngisho ukuthi ukusesha kuphumela I-Dolphin avele ngokushesha okukhulu manje. Kepha sawubona, uma ungeyena omunye wabasebenzisi abasebenzisa i-Semantic Desktop, le ndatshana ingeyakho, njengoba sikukhombisa zonke izindlela ezaziwayo Khubaza i-Baloo.
1 Khubaza i-Baloo imidwebo
2 Khubaza i-Baloo usebenzisa ezinye izindlela
Khubaza i-Baloo imidwebo
Okwamanje, lapho sifinyelela ifayela le- Izintandokazi Zesistimu »Ukusesha Kwideskithophu sithola into enjengale:
Njengoba ukwazi ukubona, akusekho inketho yokwenza kungasebenzi i-Desktop Search, ngakho-ke kufanele sisebenzise ezinye izindlela. Ngokusobala indlela engcono kakhulu manje yokuvimbela Baloo ukusebenzisa, noma okungenani hhayi i-Index anything, ngokungeza eyethu / ekhaya ezindaweni ezingafakwanga.
Khubaza i-Baloo usebenzisa ezinye izindlela
Iqiniso lokukhipha ifolda yethu yasendaweni kwizikhombisi lapho Baloo ukwenza i-Indexing, kungahle kungabi yisixazululo futhi ngasizathu simbe ukusetshenziswa kwe-CPU kusaphezulu. Yingakho singaphendukela kwezinye izindlela ezinjengalezi eziboniswe ngezansi.
Indlela yokuqala ehlukile kungaba ukuvimbela iBaloo ukuthi iqale, ngakho-ke kulokhu sivula ukuphela bese sibeka:
Enye indlela, mhlawumbe enganconyiwe kangako, ukusebenzisa:
Sudo mv / usr / bin / baloo_file_extractor / usr / bin / baloo_file_extractor.orig sudo ln -s / bin / true / usr / bin / baloo_file_extractor
Sudo mv / usr / bin / baloo_file_cleaner / usr / bin / baloo_file_cleaner.orig sudo ln -s / bin / true / usr / bin / baloo_file_cleaner
Lokhu kufanele kube ngokwanele ukukhubaza Baloo noma okungenani, kuyivimbe ekusebenziseni i-CPU ngokukhomba amafayela wethu. Vele ngiyaphinda ngiyasho ukuthi kimi akwenzekanga kimi futhi ukuseshwa (noma kunalokho imiphumela) kuyashesha kakhulu. Ulwazi oluningi mayelana neBaloo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Khubaza i-Baloo ku-KDE 4.13: Sikukhombisa izindlela zokuyifeza
Icebo elihle, kimi angibanga nezinkinga.
Ngendlela, ngifuna ukubuza: ngabe iBaloo iyayisebenzisa i-Akonadi? Ngoba ngihlala ngibakhubaza (u-Akonadi noNepomuk) futhi manje ngisebenza nge-baloo kuphela.
Bheka i-KDE UserBase wiki: http://userbase.kde.org/Nepomuk#Frequently_Asked_Questions
Yize ufunde kangcono yonke into.
Bheka i-KDE UserBase wiki:
Esixhumanisweni esinamathiselwe bathi kuzoba nenketho yokuqhafaza ye-KDE 4.13.1
Nepomuk - Baloo (Desktop Search) Inguquko kanye nolwazi lomsebenzisi olungekho
Kuhle kakhulu le bhulogi! 😉
Ku-KaOS ngaphandle kwezinkinga.
Izinkinga ezilethwa kwamanye ama-distros ngicabanga ukuthi kungenzeka kungenxa yendlela ehlanganiswe ngayo.
Okufanayo kimi uKaos usebenza kahle nge-baloo ...
Angikayivuseleli okwamanje, ngenxa yokushoda kwesikhathi kepha ngizokwenza kamuva futhi kwenzekani, uma konke kusebenza ngendlela efanele ngaphandle kwezinkinga, kepha uma kungenjalo, ususikhiphile isixazululo, Ngiyabonga
Ngifunde ukuthi amanye ama-distros awakhiphanga ngokuphelele i-nepomuk, akhubaze ezinye izici futhi asebenza eceleni kwe-baloo.
Ngine-kaos futhi i-baloo isebenza ngaphandle kwezinkinga.
Yebo, ukukhubaza i-Baloo kulula kunokwenza iModus Operandi efanayo neNeponuk (okwakungu-KDE version 4.8.4, eyayikhala nje).
Noma kunjalo, ingabe kuyinto yokuzikhethela ku-KDE-Meta 4.13?
Iqiniso ukuthi iBaloo iziphathe ngokuqonda kakhulu kubuntu bami beKubuntu 14.04 64, asikho isizathu okwamanje sokuyikhubaza 🙂
Ngafaka uKubuntu 14.04 futhi konke bekukuhle ekuqaleni, kepha bese kuthi "iBaloo" yethule izinkinga zokweqisa ukusetshenziswa kwememori, i-CPU, kanye nomsebenzi wediski ngaphezu kuka-50 kuye ku-60%, nginecomputer yesimanje esebenza kahle kodwa yangidalela izinkinga. Ngokusobala lokhu kwenzeka lapho ikhompyutha inamafayela amakhulu kakhulu angaphezu kuka-10GB ngosayizi, njengemishini ebonakalayo, ikakhulukazi uma kukhona eminingana, nangokulandwa kwesifufula okukhulu, iwahlola njalo.
Ngiphinde ngahlupheka kakhulu kulo mqondo omusha wokusesha.
Yebo, ngiqale ukufuna isisombululo ngosuku lwe-2 lokuvuselela i-KDE futhi ngithole le ndlela ukuyenza ingasebenzi.
Kufanele uvule leli fayela elifihlwe enkombeni yakho yasekhaya .kde4 / share / config / baloorc
Ngemuva kwalokho le migqa ingeziwe kufayela:
Inkomba-Inikwe amandla = false
Vala isigaba sedeskithophu bese uvalelisa ekusetshenzisweni okungalingani ngalolu hlelo.
Sawubona, kimi angisiboni isidingo sokuyikhubaza, iqiniso ukuthi kusebenza kahle kakhulu. I-Baloo ingidla kakhulu kuneNepomuk, kungabonakali kangako ... Okwamanje, ngizoyishiya isebenza.
Ngikhohliwe, ngisebenzisa uKubuntu 14.10. Yebo manje…. Ozithobayo! ^^
Sawubona @elav: Uyakhumbula lapho wawusebenzisa i-Debian + Xfce yakho ethandekayo futhi ngiyidlala kusuka ku-Arch + KDE yami? Bheka ukuthi izikhathi ziguquke kanjani ukuthi namuhla ungumsebenzisi ojabulayo walolo hlelo kanye naleyo ndawo futhi ngizithola sengikhululeke kakhulu ngeXfce ... noma kunalokho, ngeXubuntu 😀
Impela, ngilokhu ngisebenzisa i-ChakraOS emshinini wesitolo naku-NAS yami, kepha ngemuva kokuyithinta kancane kubonakala kimi ukuthi iXubuntu 14.04 iyikho konke engikudingayo: i-minimalist ngaphandle kokulahlekelwa ukusetshenziswa, isekelwa iminyaka emibili nama-PPA amabi engiqinisekisayo yezinhlelo zokusebenza ezintsha.
Impilo iyi-omelette, mngani wami!
HAHAHAHA .. Angikholwa ... O_O kodwa ngeke ngikudle .. uma wenza kahle, ngiyajabula, ekugcineni Igundane linentelezi yalo .. 😀
Ngalokho uqinisile, @elav. Ukukhuluma iqiniso, i-XFCE yenze njengegilavu ​​ku-netbook yami.
Ake ngikutshele ukuthi i-KDE iqhuma. Benginayo kwi-PC yami yedeskithophu izinyanga ezingaphezu kwezingu-10 futhi ake ngikutshele ukuthi, yize ngigcine ukuzama i-KDE endizeni, kwaba lapho ngifaka iMandrake kwi-PC yami endala futhi ngamangazwa ukuvela kwe-KDE ubenakho, futhi lezo zinguquko azitholile bezenzelwe okuhle.
Futhi, sengivele ngenze inqubekela phambili maqondana nokufaka ideskithophu yami ye-KDE ngokuyinika isitayela se-eOS esihlanganiswe ne-OpenSUSE.
I-PS: I-KDE 4.12 idlule i-GNOME 3.10 ngokusebenza nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza zehadiwe, naku-Arch kubukeka njengeGNOME 2.
E-Chakra ayikho endaweni ezinzile okwamanje. Ngiyisebenzisa ku-Arch (yebo, ngiphinde ngawa futhi, anginakho ukukhetha) futhi ngiyesaba ukwenziwa kwayo okungavamile. Kokuhlangenwe nakho kwami ​​siqu yinkomba esheshayo engizamile. Mayelana nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza, ngiyabona kuphelele futhi. Ukuthuthuka okukhulu kuneNepomuk, ngokungangabazeki.
ikuTesting!, woza ohlangothini olumnyama xD
Hehe, anginasibindi, ngithanda indawo ezinzile yaseChakra 🙂
Ezinsukwini ebengihlola iBaloo e-Arch ngihlatshwe umxhwele yijubane layo, kuyiqiniso. Izofinyelela eChakra, akukho ukushesha kwami. Futhi uma ngima ngicabanga ngakho: IBaloo ithatha umzuzwana owodwa ukuthola ifayili le-x, iNepomuk ithatha imizuzwana emi-1 ... Ngempela, angikwazi ukulinda eminye imizuzwana emi-4? Siphila sicwiliswe ekujaheni okungenangqondo ... 😉
ekugcineni ukubuntu bekungeyona into ebengiyilindele. Benginethemba lokuthi ezinye izinhlelo ezikwi-fedora ezazingaziphathi kahle kubuntu lts zazilungile… futhi zaphuma ngenye indlela. ngezibuyekezo zakamuva ze-fedora avidemux, ngokwesibonelo, ekuqaleni ezaphonsa amaphutha athile, isebenza ngokumangalisayo ngenkathi ikubuntu, ngaphezu kokusebenzisa inguqulo esephuze kakhulu, iphonsa amaphutha futhi ayiwafundi kahle amanye amafayela.
ingasaphathwa eye-baloo. Abanye bathi isebenza kahle, abanye abenzi, labo abathi ayisebenzi kahle bathi banamafayela amakhulu, kanti lawo asebenza ngaphandle kwezinkinga awayisho leyo mininingwane. Nginamafayela amakhulu kakhulu futhi amaningi futhi baloo bengiya kabi. Bekufanele ngiyikhubaze cishe ngokushesha.
ngakho-ke buyela ku-fedorite akusekho XD
ukudla okulula kusho
Yinguqulo yokuqala ye-kde engingadingi ukuyikhubaza…. Angazi nokuthi kuyasebenza. Kubukeka sengathi ukushintshwa kwegama kuza nezimanga eziningi :).
Kubukeka sengathi kuningi okudinga ukwenziwa.
Lesi isixhumanisi esivela komunye wabathuthukisi be-KDE->
U-Andres Garcia kusho
i-athikili iphelelwe yisikhathi njengoba ingeyenguqulo yakudala ye-kde
Phendula u-Andrés García
Ukufakwa kwe-firmware VIT A3301 eCanaima 4